Sida loo Play MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah lagu dhawaaqay 22 November 2013 ee UK. Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waa kulan video Console qarnigooda saddexaad ka Microsoft. Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waa xarun dhameystiran madadaalo u ah ciyaaraha, Video clip, TV live, geeyo warbaahinta, sawiro daalacanaya, internet, sheekaynta on Skype, iwm
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah taageertaa soo socda qaabab warbaahinta by default:
3GP audio 3GP video 3GP2 AAC ADTS kartoon ah GIF
Jpeg GIF H.264 AVCHD M-jpeg .mkv -coming dabayaaqadii 2014 .mov
MPEG 4-SP PNG TIFF Regelingen WMA WMA sameecadda
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ka ciyaari karaan oo keliya qaab gaar ah Deji codec MP4. Haddii ay dhacdo in aad la kulmi karto arrinta incompatibility ah halka daawashada cajaladaha. Maqaalkani waxa uu diiradda saaraysaa arrimaha noocaas ah oo idinku hanuunin inuu u ciyaaro audio iyo video kaaftoomi free on your Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Si aad u qaban arrimaha ay ka midka waxaan leenahay labo xal aasaasiga ah in:
Direct Stream Videos isticmaalaya "DLNA" (bahalka iyo hab fudud)
Beddelaan file warbaahinta aad galay Madaxweyne Siilaanyo Oo file warbaahinta ay taageerayaan (waqti iyo kaydinta dheeraad ah loo baahan yahay qaadataa)
Waayo, fursadaha, waxaan loo baahan yahay xirmo software maxaa yeelay a.
Ujeedada in waxaannu ku talinaynaa in aad isticmaasho Wondershare Video Converter Ultimate in loo isticmaali doono labada fursadaha, sidoo kale geeyo ama diinta videos.
Qeybta 1: Talaabooyinka ay ku ciyaaraan MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah Wondershare Video Converter Ultimate
Qeybta 2: Extended Aqoonta Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Wondershare Video Converter Ultimate Waa multi-Ujeeddada codsi u awood badan. Waxay kaa caawinaysaa in aad si loogu badalo videos in aad daawan kartaa waqti kasta, meel kasta. Bedeli, kor loogu qaado - wax kasta oo aad samayn - natiijada kama dambaysta waxay noqon doontaa in tayada kaamil ah.
Wondershare Video Converter Ultimate Ayaa soo socda qaababka ugu muhiimsan:
Beddelaan 159 video format (computer kasta, Mobile, qalab iyo ciyaaraha consoles'ka la qaadan karo)
Guba clips videos aad galay DVDs la hal click
Ku dar mawduucyada badan oo qurux badan
Download videos ka video qaybsiga goobta internet sida YouTube.
Stream warbaahinta in TV via streamers warbaahinta sida Chrome ee kabka (Roku, Apple TV, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ama PS4).
Talaabooyinka ay ku ciyaaraan MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Ku dhawaad ​​qof kasta oo helay lacagta run ahaantii weyn ee xogta video qaabab kala duwan, sidaas darteed ma ahan fursad u smart si loogu badalo iyaga oo dhan inuu u ciyaaro on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah via USB.
Sidaas halkan waa xal kale oo lagu sheegay in, Wondershare Video Converter Ultimatestreams aad files warbaahinta ka PC in Madaxweyne Siilaanyo Oo via streamers warbaahinta sida Chromecast.
Tallaabooyinka soo socda ayaa kugu hagi sida loo ciyaaro MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah:
Inta aynaan sii Waxaa jira laba arrimood oo muhiim ah waa in aad daryeesho
Hubi in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyo PC ku yaalaan shabakad isku mid ah, si ay Wondershare Video Converter toos ah lagu ogaan karaa qalab aad.
Hubi in aad Console Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah oo u ogolaanaya Play Streaming. Waxaad ka heli doontaa this on Console ah oo ag maraya in ay "Settings", xulashada "rabtid", ka dibna xulashada "ogolow Play To Streaming"
Haatan waxa ay ku muujiyaan mar, kaliya raac tallaabooyinka fudud hoorto warbaahinta aad dhex Wondershare Video Converter Ultimate.
Tallaabada 1 Load MP4 Faylal ay u hoorto
Wondershare Video Converter Ultimate Open
Laga soo bilaabo sare dooro "Media Server" (Jaantuska 3)
Wondershare Suuqa kala Server Media muuqan doono
Dhowr ilbiriqsi gudahood tan iskaan doonaa qalabka hoorto heli karaa
Tallaabada 2 Dooro qalab geeyo ee
Marka laga baarayo dhameysatay, xulo "Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah" u hoorto
Hadda waxaad isticmaali kartaa "Disk Scan" si aad u ogaato dhammaan file warbaahinta la heli karo (ama)
Dooro "Import" badhanka si ay u dajiyaan faylka loo baahan yahay
Hadda click double on MP4 kasta oo aad rabto in aad soo gudbiso qulquli on qalab aad
Talaabada 3 Start Streaming.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dooro file loo baahan yahay in aad isku xira bilaaban doona
Oo video muuqdaan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Waxaad xakamayn kartid video (line Time, Volume iwm soo socda) ka PC / Laptop
Ka dib waxaa la Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah oo ay taageerayaan Video / Audio qaabab.
kordhin file Weelasha Video profile
Taageerada AVI avi, divx AVI
Heerka H.264 mp4, m4v, mp4v, MOV, avi MPEG-4, QuickTime
Qaybta MPEG 4-2 mp4, m4v, mp4v, MOV, Avi MPEG-4, QuickTime
Haddii qaabab kale ma ay taageerayaan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimateto badalo files soo galeen Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah pre-qaybiyay Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah qaab marka hore halkii si toos ah hoorto warbaahinta aad. Fadlan eeg tallaabooyinka sida soo socda.
Software Open iyo file xusho
Nooca wax soo saarka Change
Dooro Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Your MP4 badasha galay default Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah qaab "wmv"
Hadda nuqul aad file gediyay in USB iyo aad lifaaqi kartaa adiga oo Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyo ku raaxeystaan ​​ku biiridda
Wmv vs MP4, Faraqa u dhexeeya wmv iyo MP4
> Resource > MP4 > Sida loo Play MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah?